PressReader - Isolezwe: 2017-11-13 - UNzimande ubazi ngetulo likaZuma
UNzimande ubazi ngetulo likaZuma
Isolezwe - 2017-11-13 - IZINDABA - MLUNGISI GUMEDE
UNOBHALA-jikelele we-SACP, uDkt Blade Nzimande uthi kade azi ukuthi uMengameli Jacob Zuma uhlela ukumxosha kwikhabhinethi yakhe.
Ekhuluma nabezindaba izolo enkundleni yezemidlalo eSugar Ray Xulu eClermont lapho amaKhomanisi ebegubha khona iminyaka engu-100, izwe iRussia lakhululeka, uNzimande uthe wazi eminyakeni emibili edlule ngetulo likaZuma lokumxosha. Uthe itulo liqale ngezidubedube zokuqala zomkhankaso wabafundi wemfundo yamahhala.
“Ngiyazi ukuthi kukhona namanye amaqabane ayegqugquzela ukuthi ngixoshwe ngoba ngigxeka izinto ezingalungile ezenziwa ngumengameli,” kusho uNzimande.
Uthe akanankinga ngokuxoshwa kwakhe ngoba akudingi ukuthi abe kuhulumeni ukuze akwazi ukusebenzela umphakathi.
“Sizoqhubeka nokukhuluma sigxeke izinto ezingahambi kahle kuhulumeni ngoba siyingxenye yomadlelandawonye. Asikwazi ukuthula sibona izinto zonakala,” kusho uNzimande.
Uthe akanandaba nokubuyela kuhulumeni ngoba akasiye umuntu okhonze izikhundla.
Unxuse amalungu eSACP ukuthi asebenze kanzima ukuze akhulise isibalo samalungu enhlangano. “Sesiyikhulume iminyaka engu 15 indaba yokuthi iSACP kumele ingenele ukhetho ngokuzimela, i-ANC izithulele ingasho lutho kodwa kuthe uma sesithatha isinqumo sokungenela ukhetho lokuchibiyela eMetsimaholo eFree State kwayilapho uKhongolose uqala ukukhuluma uthi singalungeneli ukhetho. Kodwa bona bebehlale bethi siyasabisa uma sithi sizolungenela ngokuzimela ukhetho, uma bengafuni kulungiswe amadlelandawonye,” kusho uNzimande.
Uxwayise ngokuthi i-ANC izophuma nezinkinga eziningi engqungqutheleni kaDisemba uma ingase ingakhethi abaholi abafanele.
“Sifuna kukhethwe abaholi abazohlonipha amadlelandawonye baphinde basebenzele ukuthi avuselelwe kabusha, hhayi abantu abazoqhubezela phambili izinkinga ezikhona,” kusho uNzimande.
Isekela mengameli leCosatu uNkk Zingiswa Losi lithe sebeyazisola ngokukhetha uZuma ePolokwane. “Yima sibona manje ukuthi umkhonto wagwaza ekhaya. Sasithi sikhetha kahle kanti siyazibulala,” kusho uNkk Losi onxuse amalungu e-ANC ukuba angaliphindi lelo phutha engqungqutheleni kaDisemba.
UNobhala weYoung Communist League uMnuz Mluleki Dlelanga unxuse amaKhomanisi ukuba angenele ukhetho ngokuzimela. “Indaba yokungenela ukhetho ngokuzimele kweSACP isikhulunywa kakhulu manje sekuyisikhathi sokuthi kwenziwe umnyakazo,” kusho uDlelanga. Uthe abantu bayayithanda iSACP, bangayiseka uma ingangenela ukhetho.